Apple Silicon အသွင်ကူးပြောင်းမှုအတွက် တာဝန်ရှိ Jeff Wilcox သည် Intel | သို့သွားပါသည်။ ကျွန်တော်က mac ကပါ။
Apple Silicon အသွင်ကူးပြောင်းမှုအတွက် တာဝန်ရှိ Jeff Wilcox သည် Intel သို့သွားခဲ့သည်။
Apple သည် 2020 နှစ်ကုန်ပိုင်းတွင် Apple Silicon ၏ ပထမမျိုးဆက်ကို မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ ထိုအချိန်မှစ၍ M1 Pro နှင့် M1 Max တို့ကို မိတ်ဆက်ခဲ့ပြီး 2022 ခုနှစ်တွင် ထွက်ရှိမည့် မျိုးဆက်သစ်များအတွက် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း Cupertino အခြေစိုက် ကုမ္ပဏီ၊ ဤအကူးအပြောင်းအတွက် တာဝန်အရှိဆုံးသူများထဲမှ တစ်ဦးဆုံးရှုံးသွားခဲ့သည်။: Jeff Wilcox ။
Jeff Wilcox သည် Apple ရုံးများမှ ထွက်ခွာခဲ့သည်။ 2021 ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလကုန်တွင်. သင့်အကောင့်တွင် LinkedIn တို့မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း Apple ၏ အကြီးမားဆုံးနှင့် ရည်မှန်းချက်အရှိဆုံး ကြိုးပမ်းမှုများထဲမှ တစ်ခုကို ဦးဆောင်နေသည့် ကုမ္ပဏီအတွက် ပြီးခဲ့သော 8 နှစ်တာကာလအတွင်း သူမည်ကဲ့သို့ လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်ကို ကျွန်ုပ်တို့ ဖတ်နိုင်သည်-
ဤသည်မှာ Wilcox သည် Apple တွင် သူ၏အလုပ်အကြောင်းကို ဖော်ပြသည်။
Mac စနစ်တည်ဆောက်ပုံ၊ အချက်ပြခိုင်မာမှုနှင့် ပါဝါခိုင်မာမှုတို့ပါ၀င်သည့် Mac စနစ်ဗိသုကာအဖွဲ့၏ ဒါရိုက်တာ။ Macs များအားလုံး၏ M1 ချစ်ပ်မှ Apple Silicon သို့ ကူးပြောင်းမှုကို ဦးဆောင်ခဲ့ပြီး SoC နှင့် T2 ပေါင်းစပ်ပရိုဆက်ဆာနောက်ကွယ်ရှိ စနစ်တည်ဆောက်ပုံတို့ကို တီထွင်ခဲ့သည်။ အဲဒီမတိုင်ခင်
Intel တွင် Jeff Wilcox သည် Intel ၏ ဒီဇိုင်းအင်ဂျင်နီယာအဖွဲ့တွင် Soc Architecture client အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သည်။ Soc အားလုံး၏ဗိသုကာအတွက်တာဝန်ရှိသည်။ ကုမ္ပဏီ၏ ဖောက်သည်အားလုံးအတွက်။
Wilcox သည် ယခုဇန်နဝါရီလတွင် Intel တွင် စတင်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ တိုက်ဆိုင်စွာပင်၊ Wilcox သည် Intel တွင်အလုပ်လုပ်ခဲ့သည်မှာ ပထမဆုံးအကြိမ်မဟုတ်ပေ။ တကယ်တော့, Intel မှ Apple မှ လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။ ကျောင်းအုပ် အင်ဂျင်နီယာအဖြစ် ၃ နှစ် လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။
ယခင်က Nvidia နှင့် Magnum Semiconductor တို့တွင် အလုပ်လုပ်ခဲ့သည်။. LinkedIn မှာ လွှင့်တင်ခဲ့တဲ့ သူ့ရဲ့ နှုတ်ဆက်စာမှာ၊ ဖတ်ရှုနိုင်သည်-
မယုံနိုင်လောက်စရာ ရှစ်နှစ်ကြာပြီးနောက်၊ ကျွန်တော် Apple ကို စွန့်ခွာပြီး နောက်ထပ်အခွင့်အရေးတစ်ခုကို ရှာဖွေဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ ဒါဟာ မယုံနိုင်လောက်စရာ ခရီးတစ်ခုဖြစ်ပြီး အဲဒီ့အချိန်အတွင်းမှာ ပြီးမြောက်ခဲ့သမျှအတွက် ဂုဏ်ယူမဆုံးနိုင်ဘဲ Apple Silicon ရဲ့ M1၊ M1 Pro နဲ့ M1 Max SOCs နဲ့ စနစ်တွေဆီ ကူးပြောင်းခြင်းမှာ အထွတ်အထိပ်ပါပဲ။
Apple မှာရှိတဲ့ ကျွန်တော့်ရဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေနဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအားလုံးကို အရမ်းလွမ်းဆွတ်နေပေမယ့် ဒီနှစ်အစမှာ စတင်မယ့် နောက်ထပ်ခရီးကို ကျွန်တော် မျှော်လင့်နေပါတယ်။ လာဖို့ပို!
Wilcox ထွက်ခွာမည်ဟု မျှော်လင့်ပါသည်။ Apple Silicon နှင့် Apple ၏ အနာဂတ်အစီအစဉ်များကို မထိခိုက်စေပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Apple » NOTICIAS » Apple Silicon အသွင်ကူးပြောင်းမှုအတွက် တာဝန်ရှိ Jeff Wilcox သည် Intel သို့သွားခဲ့သည်။
Dropbox သည် ၎င်း၏ Apple Silicon-သဟဇာတဖြစ်သော အက်ပလီကေးရှင်းကို စတင်စမ်းသပ်နေပြီဖြစ်သည်။
15 နှစ်နှင့် (RED) နှင့်ပေါင်းသင်းခြင်းကြောင့်ဒေါ်လာသန်း 270 ကျော်၊